GNU gcc 10: yemahara compiler yakavandudzwa | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Zvirongwa, Free Software
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa iyo GNU compiler, unogona kufara kuziva kuti pane nyowani vhezheni kunze. Ichave iripo gcc 10 saka unogona kunakidzwa nenhau dzavo. Kana iwe usingazive kuti ndeyipi vhezheni yauinayo, unogona kushandisa -version Sarudzo ku gcc kukuratidza iyo vhezheni yakaiswa pane iyo GNU / Linux distro kana * nix operating system yauri kushandisa. Kana iwe uri kushandisa imwe compiler, ini ndinokurudzira iwe kushandisa gcc, iko kuputika.
Kana zvakadaro chii chitsva cheramangwana GNU gcc 10, iwe unofanirwa kuziva kuti ine zvimwe zvinatsiridzwa pamusoro peshanduro dzakapfuura Iwe unogona parizvino kurodha gcc 9.2, asi kuburitswa kutsva kwakamirirwa kwenguva refu kuri kuuya. Kunyangwe ichigere kuburitswa, kumwe kugadziridzwa kwainosanganisa kunozivikanwa kuburikidza nebasa rekuvandudza. Pakati pekuvandudza, iyo __builtin_roundeven mabasa anoenderana neIO / IEC TS 18661 akabatanidzwa.
Kana ari C ++ mutauro (g ++) nhamba huru yezvinhu zvitsva yakaitwa, kunyanya makumi maviri acho. Kumwe kukanganisa kwakange kuri mushanduro dzakapfuura dzakanangana neC ++ kwakagadziriswawo. Asi pamusoro peC neC ++, iwe unotoziva kuti iyo GNU GCC compiler inogamuchira nhamba hombe yemitauro yemitauro. MuFortran kune zvakare kuvandudzwa, senge default buffer saizi yeI / O uchishandisa mafaera akapfava akawedzera kusvika 20, nezvimwe.
Kana iri chirongwa chega, pane zvekare kodhi inowedzera yeIA-32 uye AMD64 zvivakwa (kana EM64T). X86 michina ikozvino ichave nerutsigiro rwekuwedzera __builtin_roundeven ine yakakodzera SSE 4.1 yekuwedzera chirevo. Texas Instruments PRU mapurosesa akagamuchira zvakare kuvandudzwa, iine nyowani yekumashure-yekupedzisira inotarisa idzi TI machipisi. Ingangove ichiri kugashira dzimwe shanduko kudzamara yaburitswa kekupedzisira, saka tichave tichitarisa painoburitswa pakupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » GNU gcc 10: yemahara compiler inovandudzwa